विवाद हल गरिदेऊ – Kanak Mani Dixit
हिमाल खबरपत्रिका (२२-२८ फागुन, २०७३) बाट
भूकम्पपीडित जनता तेस्रो वर्षे मनसुनमा पनि अस्थायी टहरा र त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । पुनःनिर्माणमा जनताको जीवन, जीविका र घरटहराको काम अलपत्र छ । तर नागरिक मात्र होइन, देवदेवीको पनि यस्तै बेहाल छ ।
महाभूकम्पको बेला छिमेक र दूरदराजका पीडितलाई जोगाउन जसरी सर्वसाधारण लागिपरे, त्यसरी नै मठ, मन्दिर, स्तूप र गुम्बाका सामग्री संरक्षणमा पनि ज्यान दिएर लागे । राज्यले पनि पुनःनिर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ग¥यो र पुनःनिर्माण प्राधिकरण स्थापना भयो, तर त्यसपछि भागबण्डा र अकर्मण्यताले काम अगाडि बढेन । यस कारण घर मात्र नठडिएको होइन, सम्पदा पुनःनिर्माणमा पनि धक्का पुग्यो ।
हाम्रा मठ–मन्दिर, पाटीपौवा जीवित संस्कृतिका प्रतीक हुन् र तत्कालै उच्चतम संवेदनशीलता सहितको पुनःनिर्माण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । एउटा मन्दिरको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ हुँदा त्यससँग सम्बन्धित ‘इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज’ कमजोर बन्न जान्छ— पूजाआजा, जात्रा, मेला, भोजभतेरमा शिथिलता आउँछ ।
सन् १८२८ देखि १८४४ सम्म तत्कालीन बेलायती रेजिडेन्ट ब्रायन हटन हड्सनसँग काम गरेका चित्रकार राजमान सिंहले बनाएको काष्ठमण्डपको पेन्सिल स्केच।
काठमाडौंको पर्यटकीय आकर्षण (र आर्थिक आर्जन) लाई मजबूत बनाउन पनि तत्काल सम्पदा पुनःनिर्माण आवश्यक छ । अधिक प्रदूषण, अनियन्त्रित शहरीकरण आदिका कारण उपत्यकाको चमक घट्दो छ र महाभूकम्पको प्रकोपले झन् गिराएको छ ।
पुनःनिर्माणमा मुख्य दायित्व बोक्ने पुरातत्व विभागले निर्देशनात्मक भूमिका खेल्न सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई प्रभावकारी संस्थाको रूपमा तर्जुमा गरिए पनि यसले सम्पदा संरक्षणलाई ध्यान दिएन । उता संस्कृति संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बोकेको संस्था हो युनेस्को, तर समग्र सम्पदा पुनःनिर्माणमा मार्गदर्शकीय भूमिका उसको पनि छैन ।
यता स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा जनस्तरबाट पनि आवाज उठ्न सकेन, जागरुक अगुवा भएका एकाध ठाउँमा बाहेक । समग्रमा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुत्तरदायित्वका कारण नेपालको र विशेष काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृतिमाथि असह्य प्रहार हुन पुगेको छ ।
सम्पदा पुनःनिर्माणमा एउटा अति महत्वपूर्ण बहसको टुंगो नलागेको कारण पनि पुनःनिर्माणले गति नलिएको हो । कुरो छ– ऐतिहासिक संरचना पुनःनिर्माण गर्दा आधुनिक प्रविधि या सामग्री प्रयोग गर्ने या नगर्ने ? एउटा पक्ष, जसले भन्छ— मल्लकालीन पूर्वजले जे प्रविधि र तौरतरीका अपनाए त्यो नै हाम्रो सम्पदा हो र पुनःनिर्माणमा उतिबेलाका वास्तुविद्को कालिगडीलाई घटबढ या पुनव्र्याख्या नगरी पुनस्र्थापित गरिनुपर्दछ । यस विचारका हिमायती हुन्, संस्कृतिविज्ञ सुदर्शनराज तिवारी । उनको भनाइ छ, “यो सन्दर्भमा मध्यममार्ग हुँदै हुँदैन, पूर्वजले यहाँको वातावरण र परिवेश बुझेर मन्दिर, सत्तल निर्माण गरे । हुबहु परम्परागत हिसाबले नै पुनःनिर्माण हुनुपर्दछ प्रविधि र सामग्रीमा ।”
सबैले मान्दै आएका विद्वान् हुन् तिवारी र उनीसँग मन मिल्ने अन्य विज्ञको यसखाले अडानले नै पुनःनिर्माणको सोचलाई मूलतः प्रभावित गरेको छ । तर विमति राख्ने पंक्ति पनि सानो छैन । प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र युनेस्कोले यो विवादबाट समाधान निकाल्न दुई–दुई वर्ष तदारुकता नदेखाउँदा समय नाश हुन गएको छ ।
तिवारीको विचारमा दम छ र उनको अडानले पुनःनिर्माणमा जथाभावी हुनबाट रोक्छ नै । तर यो पनि सोचनीय छ कि ‘बीचको बाटो’ छ, छैन ? थुप्रै विशेषज्ञसँगको छलफलबाट यो पंक्तिकारको निष्कर्ष छ कि ‘केस–बाई–केस बेसिस’ मा पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ र अपवादको रूपमा कतै आधुनिक प्रविधि तथा सामग्री समेत प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । अर्थात्, बीचको बाटो पहिल्याउनैपर्छ ।
यसरी भनौंः “सम्पदा पुनःनिर्माणमा पूर्वजले अपनाएको वास्तु तथा इन्जिनियरिङ अनुसार नै बनाउने सोच बसाल्नुपर्छ, तर अपवादका लागि ठाउँ राख्नुपर्छ । पहिलो र उच्चतम मन्त्र पारम्परिक हिसाबको पुनःनिर्माण नै हो, तर समुदाय÷नागरिकको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दा आवश्यक परे नदेखिने गरी आधुनिक प्रविधि र सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै स्टील र कंक्रिट । इतिहासकालको समाज र अत्याधुनिक युगको सन्दर्भ हेरेर पनि तौरतरीका तथा वास्तु प्रयोगमा न्यूनतम हेरफेर मान्य हुनुपर्छ । कति गर्ने, नगर्ने भन्ने विषयमा एक एक भवन या संरचना हेरी अनुमति, निगरानी, नियमन तथा निर्देशन दिने निकाय पुरातत्व विभाग हुने नै छ ।”
आज सूक्ष्म रूपमा आधुनिक प्रविधि÷सामग्री प्रयोग गर्न चाहनेलाई पनि ‘विपक्षी’ ले निष्क्रिय बनाइदिएको छ । एकखालको लोकरिझ्याइँ नै हावी भएको छ भनौं, जहाँ विदेशीको इशारामा चलेको भन्ने आरोप सामु क्रियाशीलता लल्याकलुलुक् हुन पुगेको छ ।
आजको दिनमा जनसाधारणको सुरक्षा तथा दिगो पुनःनिर्माणको लागि चाहिने मुख्य सीप हो– ‘स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ’, जसले ‘लोड’, ‘स्ट्रेस’ र ‘साइस्मिसिटी’ को आधारमा कुन भवनले कति कम्पन थेग्न सक्छ भन्ने ‘म्याथम्याटिकल क्याल्कूलेशन्’ गर्दै डिजाइन मूल्यांकन गर्छ । यस्तो प्रविधि बेगर संस्कृतिविद् र आर्किटेक्टको सुझावमा मात्र पुनःनिर्माण गर्नु उपयुक्त हुँदैन, र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले सुझाव दिएमा पुरानो भवनलाई आधुनिक हिसाबले ‘स्ट्रेन्थन्’ पनि गर्नुपर्छ । यसो भन्दा जथाभावी हुन दिने भनेको त होइन ।
आजै पनि पुरातत्व विभागलाई अटेर गरेर कतिपय सम्पदा पुनःनिर्माण हुँदैछन् भने विभागको नियम मान्नेहरू अलपत्र छन् । बौद्ध स्तूपमा कंक्रिट जमाएर माथिल्लो भाग (हर्मिका) अड्याइयो । पशुपति मन्दिर परिसरभित्र नचाहिंदो सिमेन्ट कंक्रिट प्रयोग भएको छ । पुरातत्व विभाग स्वयंले सुर्खेतको काक्रे बिहारमा पुनःनिर्माणमा कंक्रिट प्रयोग गरेको सुनियो ।
अमेरिकाको भूकम्प प्रताडित क्यालिफोर्निया राज्यमा २० वर्ष काम गरेका ‘विल्डिङ कोड र पब्लिक सेफ्टी’ का विशेषज्ञ इन्जिनियर अनन्तराम वैद्यको भनाइ छ– “सम्पदा पुनःनिर्माणमा पहिलो कुरा सर्वसाधारणको सुरक्षा हेरिनुपर्दछ, र परे अनुसार आधुनिक प्रयोग अपनाउनुपर्छ । कुनै खालको रुढीमा अड्किनुहुँदैन । कुनै भवनको पुनःनिर्माण गर्नुअघि भूकम्प प्रतिरोध सम्बन्धी विज्ञान र डाटामा आधारित भएर डिजाइनको अध्ययन गर्नुपर्छ ।”
पुरातत्व विभाग तथा प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्नुपर्ने भएको छ ‘पारम्परिक र आधुनिक’ बीचको यो विवाद हल गरिदेऊ, सम्पदा पुनःनिर्माण अगाडि बढोस् ।